Vista's Colorful Planet: ဘလော့ ဖုန်ခါ ပိုစ့်
ydk hpfrwifwwf yHkyJwif &w,f
just read and clean your dust from yangon
ဆပျပရိုကျ၊ ဆပျပရိုကျ၊ ဒကျဘယျ ဆပျပရိုကျ။ - ဆပျပရိုကျ၊ ဆပျပရိုကျ၊ ဒကျဘယျ ဆပျပရိုကျ။ ဇနီးသညျက အဖမြေားနအေ့တှကျ စပရိုကျလုပျဖို့ တီရှပျတဈထညျ မှာထားတယျ။ မိမိလညျးမသိဘူး။ ဖကျဒတျဈကနေ လာပို့တော့ ယူထားလိ...
ပြန်မြင်ချင်ပြီ.... စိမ်းလန်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးဆီ... - ပြတိုက်ရှေ့နားက Serbian sculptor MATIJA VUKOVIC ရဲ့ The miner ဆိုတဲ့ ပန်းပုရုပ် ဆောင်းဦးဝင်လာပြီဆိုတော့ အအေးတော့ပိုလာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဆောင်းလို အေးအေးစက်စ...
Rise of the Soul - A thousand noises cannot disturb the Silence in my mind. If I can’t speak with my soul, there is nothing I want to talk. If I have to relate to shallow ins...